Aurora HDR MacPhun Giveaway | ငါက Mac ပါ
မနေ့ကပဲ MacPhun developer များမှ Aurora HDR application အသစ်ကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည် ဒီတူညီတဲ့ဝဘ် MacPhun မှယခုဖြန့်ချိသည့်ဤကိရိယာအသစ်မှဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အတူ ငါတို့အတူတူကုဒ်နံပါတ် ၃ ခုကိုပေးမယ်။ ငါတို့မဖြတ်သန်းမီ၊ Macphun ကိုသူနှင့်ဤဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော software နှင့်ယခင်ပေးအပ်မှုများအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဤကြီးမားသောလျှောက်လွှာအတွက်ကုဒ်သုံးခု၏ဤပေးကမ်းမှုအသစ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ကြပါစို့။
သတိရရမည့်အချက်တစ်ခုမှာအသုံးပြုသူများသည် Aurora HDR အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်ဗားရှင်းကို Apple Store တွင်ရနိုင်သည် ၃၉.၉၉ ယူရိုကန့်သတ်ထားသည်၎င်း၏တရားဝင်စျေးနှုန်း 49,99 ယူရိုဖြစ်လိမ့်မည်ကတည်းက။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသင်သည်၎င်းကိုစိတ်ဝင်စားရန်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုချန်ထားပေးသည်။
အခြား version တစ်ခုတွင် Pro butt ကိုထည့်ပေးပြီးအပိုလုပ်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။ အသုံးချပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံး၏အခြေခံသည်အတူတူဖြစ်ပြီးပိုမိုအဆင့်မြင့်သောတည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာများနှင့်ရွေးချယ်စရာများတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
bracketing / bracketing နှင့်အကန့်အသတ်မဲ့အလွှာများအတွက် sokits
အမျိုးမျိုးသောတောက်ပမျက်နှာဖုံးများနှင့် gradient tool ကို
Photoshop, Lightroom နှင့် Aperture တို့နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီမှုရှိသည်
ဤကိစ္စတွင်စျေးနှုန်းသည်အနည်းငယ်မြင့်မားသော်လည်း၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို ဦး စားပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်စျေးကွက်ရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းကိုမတွေ့ရပါ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် စျေးဟာ ၁၁၉.၉၀ ယူရိုဖြစ်ပါတယ် ၎င်းကိုတရားဝင် MacPhun ဝက်ဘ်ဆိုက်မှသာရနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပုံမှန်ဗားရှင်းကို update လုပ်သည်။ ချွတ်ယူရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြပါ ပေးဆောင်ခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်ဗားရှင်း ဒီ app ကနေတစ်ဆင့်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေလုပ်နိုင်တယ်။
ကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ကိုရှင်းပြပြီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အများစုကိုစိတ် ၀ င်စားသည့်အရာ၊ Soy de Mac မှကံကောင်းသည့်စာဖတ်သူသုံးယောက်ကအနိုင်ရမည့် Aurora HDR အတွက်ကုဒ်သုံးခုကိုဆွဲခြင်းနှင့်အတူသွားသည်။ တောင်းရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
Twitter ပေါ်တွင် Soydemac ကိုလိုက်နာပါ
စကားစုပါသော tweet တစ်ခုရေးပါ။ @SoydeMac #AuroraSoydeMac မှပေးထားသော AuroraHDR application အတွက်မဲနှိုက်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်သည်။
#AuroraSoydeMac ကို Tweet လုပ်ပါ
ဆုရရှိသူသုံး ဦး အပေါ်ကြေငြာလိမ့်မည် ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် ဒီမှာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် Twitter အကောင့်ပေါ်မှာ။ သင်တန်းသားများကိုကံကောင်းခြင်းနှင့် MacPhun အားသူ၏လျှောက်လွှာများနှင့်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထိတွေ့သည့်ကိရိယာများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ဒီမဲနှိုက်ခြင်းတွင်ပါဝင်မှုမြင့်မားမှုအတွက်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာအတွက်ကုဒ်များမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နောင်တရကြသည်။ ဒါတွေဟာအနိုင်ရသူတွေပါ။
မင်းရဲ့သုံးယောက်အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ Mac ကနေဆွဲဆောင်မှုအသစ်တွေကိုပြင်ဆင်နေတုန်းမှာဂရုစိုက်ပါ။ ကံကောင်းတဲ့သူတွေကိုမကြာခင်ပြန်လာလိမ့်မယ် Twitter မှတစ်ဆင့်သင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » #AuroraSoydeMac MacPhun ၏ Aurora HDR အက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုပေးဆပ်မှု
Winners ကြေညာ? =)
Adele ၏အယ်လ်ဘမ်သစ်သည် Apple Music တွင်မရှိတော့ပါ